Nisy ny fifandonana teo Antatao raha tonga dia nitifitra ireo dahalo. Maty voatifitr’ireto farany ny iray tamin’ireo mpanaradia, izay zaodahin'ny tompon'omby. Votsotra ireo takalon'aina sy ny omby. Nitsoaka nanavotr’aina ireo dahalo ka vaky nandositra ary nizara roa ny lalana. Ny roa niverina any anaty ala ary ny roa nahazo tampon-tanety mazava. Ireto farany no nenjehin'ireo Zandary ka azo sambo-belona niaraka amin'ny basim-borona iray.
Naterina ao amin'ny Brigady ireo efa voasambotra, mitohy kosa ny savahao hikarohana ireo dahalo roa tafatsoaka.